musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » Mumwe akafa, vazhinji vakashaika munjodzi mbiri dzezvikepe muIndia
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kurwisa • India Kupwanya Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Vanhu vakawanda vakashaika mushure mekurovera-ngarava mbiri kuMajuli, India.
Ngarava mbiri dzevafambi dzinobonderana muIndia.
Chikepe chidiki chevapfuuri chinotenderera muIndia kubonderana.
Chikepe chimwe chete chemufambi anourawa munjodzi.
Ngarava mbiri dzakazadza vafambi dzinofamba dzakatarisana dzakapesana dzakanangana neBrahmaputra Rwizi kuchamhembe kweguta reJorhat, iri kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwenyika yeAssam, nhasi.
Zvinonzi paive nevanhu vanopfuura zana muzvikepe, vazhinji vacho vachiri kushaikwa uye vachitya kufa.
Vhidhiyo inotenderera pamhepo inoratidza chikepe chihombe, chinorema, chaitakura vafambi pamwe nemotokari dzinoverengeka, ichirovera muchikepe chidiki chevapfuuri.
Zvidiki ferry yakagumburwa pakarepo mushure mekurovera, ichienda pasi pemvura mukati memasekondi ekupunzika, vhidhiyo inovhiringidza sezviri pachena yakapfurwa nemunhu aifamba pachiratidzo chikuru cheigwa. Vanhu vakamhanya vachibuda muchikepe chinonyura, zvinhu zvavo zvichiyerera.
Hapana ruzivo rwevangangodaro vakaurayiwa rwakakurumidza kuwanikwa.
Feri dzinoshandiswa zvakanyanya kutakura mu India. Tsaona dzezvikepe dzinojairika nekuda kwekuwandisa kwevanhu uye kusagadzikana kwekuchengetedza pamwe nekuchengetedza matanho.